के तपाईंलाई थाहा छ के छ हावा
एक हावा महासागर वा समुद्र, नदियों को किनारा देखि उजागर हावा हो। यसको गति प्रति माइल4मीटर भन्दा बढी छैन। एक सानो हावा, जुन दिनमा2पटक परिवर्तन गर्दछ। दिउँसो यो पानीको किनारमा पानीको किनारमा हिँडिरहेको छ, र रातको हवाले, विपरीतमा, ठुलो जमीनबाट सागरतिर निस्किन्छ। यो स्पष्ट छ कि पृथ्वी को तापमान एक दिन मा बढ्छ, र रात देखि यो गिरता छ, यसैले पवन दिशा परिवर्तन गर्दछ।
अधिक जान्नुहोस्, एक हावा के हो र यो कहाँ भेटिन्छ? उनको लागि सामान्य सिजन गर्मी हो, किनकि यो वर्षको यस अवधिमा पानीको तापमान र किनारा एकअर्काबाट फरक फरक छ। यो मौसम क्षेत्रहरु मा ट्रोपिक्स जस्तै हुन्छ। हामी एक हावा हावा ब्ल्याक सागर र अजोकको किनारमा उभिन्छौं, र यो पनि केहि जलाशयहरु को कोठहरुमा देख्यो।
समुद्री यात्रा एक परी कथा हो
समुद्री किनारमा जानुहोस् र उज्यालोको लाइट टच महसुस गर्न - यो एक पर्यटकको सपना होइन? धेरै यात्रा एजेन्सीहरू लिनरहरूमा रोचक समुद्र यात्राहरू प्रदान गर्छन्। तपाईंको छुट्टिको लागि सही क्रूज पत्ता लगाउन, तपाईंले यो यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंले यात्राबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुहुन्छ। जान्नुहोस् कति भ्रमण भ्रमणमा समावेश छ, र नबिर्सनुहोस् कि तपाई यात्रामा जानुहुन्छ जहाजमा जानुहोस्।
समुद्री यात्राका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय क्षेत्र युरोप, क्यारिबियन, नार्वेजियन फ्रान्सहरू, अष्ट्रेलिया, बाल्टिक बंदरगाहहरू हुन्। हालको यात्रा एजेन्सीले संसारभरका भ्रमणहरू प्रस्ताव गर्दछ, जुन3देखि4महिना लाग्छन्, र प्राय: लिनरहरूले जनवरी-अप्रिल देखि राउन्ड-द-संसारका यात्राहरू गर्छन् ।
यस्तो यात्रामा तपाइँ निश्चित रूपमा के महसुस गर्नुहुन्छ महसुस गर्नुहुन्छ, र तपाइँ उसलाई थाहा पाउन बाट धेरै खुशी पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं पहिलो पटक एक क्रूजमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो पानीको दृश्यको आनन्द उठाउन बाह्य केबिन बुक गर्नुहोस् र मौसम नेभिगेट गर्न राम्रो छ।
भर्खरको लागि नववर्ष
विशेष गरी नवजातका लागि आकर्षक यात्रा।
पहिलो, यस अविस्मरणीय यात्रा जीवनको लागि स्मृतिमा रहनेछ।
दोस्रो, उत्सव पछि महिनाको योजना संग सम्बद्ध सबै कठिनाइहरू स्पष्ट रूपमा यथासंभव निर्धारण गरिनेछ। हरेक स्वादका लागि खाना र मनोरञ्जन दिनहुँ उत्कृष्ट छुट्टीमा यात्रा गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, तपाईं रिटाइन्समा प्रत्यक्ष रूपमा लिङ्कमा राख्न सक्नुहुनेछ, रिश्तेदारहरूको सहभागिता बिना, जसमा नववार्डहरूले अजनबहरूको तुलनामा बढी प्रतिबन्ध लगाउन सक्दछन्।
चौथो, यदि तपाईंले गर्मीमा हनीमून खर्च गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि जहाजको डेकमा हिंड्नु वा अशोर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई आफैंलाई कस्तो लाग्छ कि समुद्री हवा वा समुद्र किनारा।
यदि तपाईंको वित्तीय अवस्थाले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ, एक बालकनी संग एक सुइट बुक गर्नुहोस्। केही बालकहरू तीन सयसम्म पुग्छन् (300!) Sq.m.
नयाँ नवजातहरू लहरहरू, नरम ब्रेजीहरू र जादुई संसारलाई पत्ता लगाउँछन्, उनीहरूको आँखा रहस्य होइन।
यात्रा गर्नेहरू लिफ्टहरू सुरक्षित छन्। टाढा टाढाका लागि जहाजहरू तातोपानी र स्वच्छता, विभिन्न प्रकारका व्यंजन र आरामका क्याबिनहरू छन्। एक सानो टिप: आफ्नो यात्रा को एक यात्रा मा फिट गर्न को लागि कोशिश न गर्नुहोस, अन्यथा मूड अत्यधिक fussiness र एक व्यापक कार्यक्रम द्वारा खराब हुन सक्छ।
तपाईंको हावा-क्रूज एक शुभ घटना र अद्भुत आराम बन्न दिनुहोस्!
कलगागा क्षेत्रमा बाँकी: परिसरहरू र फोटोहरूको विवरण
मेट्रो स्टेशन "पोलजाहावस्काया"। मस्को मेट्रोको सबैभन्दा असामान्य स्टेशन
स्पेनमा बाँकी। राष्ट्रिय खाना
Svetlogorsk को बिरुद्ध कैलिनिनग्राद क्षेत्र: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्यहरु
कानून कसरी तोड्न अमेरिकामा जानुहोस्
"Bridgestone आइस क्रूजर 7000": समीक्षा। टायर Bridgestone आइस क्रूजर 7000 मूल्यहरु
Geothermal शक्ति बिरुवाहरु के हो
इलेक्ट्रोफर्मिंग मिसिन - सञ्चालन को सिद्धान्त। तपाईंको आफ्नै हातमार्फत इलेक्ट्रोनिक-व्यक्तिगत मेसिन कसरी बनाउने?
अर्थोडक्स प्रतीक: ख्रीष्टको Pantocrator को प्रतिमा
LADA Kalina क्रस: विनिर्देशों, फोटो
जो मूल र रूसी संस्करणमा Spongebob voiced?
आफ्नो निधारमा एउटा टक्कर। फारामहरू र उपचार को तरिका।
SFX-संग्रह के हो?
भिषा र मास्टरकार्ड सिस्टम रूस मा। भुक्तानी प्रणाली भिषा र मास्टरकार्ड को विवरण